3 Siyaabaha dib ugu Samsung Galaxy S4 / S3
Mobile uu noqday in ka badan oo lagama maarmaan u ah maalmahan. Waxay leeyihiin in ay isticmaalaan qalabka la qaadi karo si ay u kaydiso xog muhiim ah sida xiriirada, fariin xitaa jadwalka iyo sidoo kale sawiro, qoraalo, iwm Si kastaba ha ahaatee, in sannadahan, dadka badanaa ay helaan emails qaar ka mid ah, soo diray dadka isticmaala halkaas oo ay ka cawdaan in ay si qalad ah la tirtiro ama laga badiyay xog muhiim ah ka Samsung Galaxy. Waxaa intaa dheer, laakiinse iyagu ma ay awoodaan in ay dib u helaan xogta lumay, sababta oo ah waxay dib ma ilaa macluumaadka taleefanka si joogto ah .Hadda-a-maalmood hayaan yihiin heer sare ah loo baahan yahay. Run ahaantii ma aad ku noolaan karaan iyaga oo aan qaadan ama qaata hayaan. Oo sidaas waxa uu noqday lagama maarmaan ah in aad u dhawrtaan oo u si fiican u kaydiso. Weligaa ma u maleeyey mid wax? Haddii aad lumiso xogta shaqada maxaa dhici doona? Waa hagaag, aad is cabsi waayaan faylasha? Waa hagaag, haddii aad isticmaalayso Galaxy E5 ah, waxaad leedahay hadda ma sheegin wax sabab loo walwalo! Hayaan hadda waa wax sahlan oo aad u!
Sidaas darteed, waxaa jira saddex siyaabood ee loo marayo oo aad samayn karto dhabarka ilaa, ay kala yihiin: -
a) Samee gurmad ah u Samsung Galaxy S5 in ay kombiyuutarka
b) Samee gurmad ah ee Samsung S5 in kiniinada kale ama telefoonada
c) samee gurmad ah ee Samsung S5 in account Google
Siyaabo 1: Riix in ay dib u walba ku Samsung Galaxy S4 / S3 ah
Technology ayaa hoos wax walba oo aadanaha 1 click. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dib u samayn ilaa wax kasta oo ku saabsan / Samsung Galaxy S4 ay S3 iyo sidoo kale u isticmaali MobileGo Wondershare in ay dib wax walba oo ka Samsung Galaxy S4 / S3 in computer MobileGo ee tababare warbaahinta awood badan oo sidaas oo u sahashay badan abid in uu soo bixi, maareeyaan, soo dejinta & dhoofin aad music, sawiro iyo videos la riixo ee badhan, in waqtiga dhabta ah, oo dhan hal meel.
• Wareejinta Easy iyo xog ammaan, Si fudud ku xiran dhexeeya telefoonada gacanta
• downloads Fast iyo ammaan
• xal Mobile; xal Utility, xal Warbaahinta, xal Business
Sidee in ay dib u walba qalabka la MobileGo
Talaabada 1: Orod Wondershare MobileGo ka dibna aad qalab aad ku xiran waxaa la.
Talaabada 2: Setup iyo bilaabaan in ay dib ilaa qalab aad
Talaabada 3: ilaa taageero Automatic ka dhici doona
Siyaabo 2: xiriirada kaabta / SMS / warbaahinta ka Samsung Galaxy S4 / S3 ah
1) xiriirada kaabta in SIM / kaarka SD
1. Aad screen Home Galaxy S4 ee mar laga faaiidaysanayo on fure Home ah.
2. Tubada on icon Codsiga ku yaal qaybta hoose-midigta ah ee Favorites bar ah.
3. Tubada on "My Files" liiska codsiga.
image tallaabo 2 image tallaabo 3
4. Dooro iyo tubbada ah nooca file in aad rabto in lagu wareejiyo.
5. Dooro fayl in aad rabto in lagu wareejiyo.
6. Laga bilaabo liiska fursadaha, tuubada on "dhaqaaq".
7. Ka noocyada kaydinta heli karo, tuubada on "kaadhka xusuusta SD".
image tallaabo 4 image tallaabo 6 image tallaabo 7
8. Dooro meesha aad rabto in aad u guurto faylasha multi-warbaahinta la doortay iyo garaac "halkan dhaqaaq". Sidaas dooran gal kasta oo qortid content in ay jiraan.
2) xiriirada kaabta in Gmail Account
Tallaabooyinka hoos waxaa ku gartaan si loo qabto gurmad ah: -
Step1: heshay in Settings
Step2: Markaas guji Accounts
Step3: Tallaabada xigta waa kaabta
Step4: Waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay in guji la joojiyo oo lahaa;
3) Codsiyada kaabta in server Google
• Riix goobaha
• hoos u dhaqaaq ilaa iyo dib dib
• waxaa Untick iyo in uu joojiyay gurmad
• hubi in dib xogta aan waxaa laga
• guji account gurmad
• dhigay xisaabtaada
4) ee kaabta in kaarka SD ah warbaahinta
image tallaabo 4 image tallaabo 6
5) ee kaabta in computer / PC warbaahinta
a. Midhadh Cable Data ah
b. Connect aad Samsung S4 / S3 si aad u computer
c. Fur drive halkaas oo qalab aad xiran yahay
d. Raadi faylasha aad rabto in lagu wareejiyo
e. Dooro liiska faylasha lagu wareejiyo
f. Doorasho Press "dhaqaaqo" si ay u dhamaystiraan
g. Sug ilaa kala iibsiga oo dhan la buuxiyo
Siyaabo 3: Google ma sameeyo sida gurmad ah si toos ah?
Waa in ay suurtogal tahay oo waa in aanay noqon wax badan oo dhibaato ah. Ma aha in shaqo adag. In badan oo xogta ah in la siiyo ee aad taleefan Android ama kiniin ah waxaa sidoo kale xoojiyaa by Google (ama barnaamijyadooda shaqsi aad u isticmaali) si toos ah. Your photos iyo sawiro ka dibna sidoo kale si toos ah taageeray karaa, laakiinse iyagu ma ay yihiin waxaa by default. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah macluumaadka lagama maarmaanka ah marna xoojiyaa si toos ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado waxa sameeya Google dib. Halkan waxaa ku qoran liis ah: -
• Xiriirada, Email, iyo Kalandarada
• Settings System Qaar ka mid ah
• Apps iyo waxyaalaha kale ee iibsaday
• Qaar ka mid ah cid saddexaad App Data
Tani waa sida aad u noqon karaa Upload ah automatic
Read this article dheeraad ah: http://www.howtogeek.com/140376/htg-explains-what-android-data-is-backed-up-automatically/
Faa'iidodaro ee si toos ah dib u la Google: -
• Haddii aad xiran oo aan Internetka, Google Drive kale oo uu leeyahay dhibaato.
• Waxaa si toos ah u hagaagsan doonaa wax files qayb cusub ama is beddelay laga heli karo computer ee deegaanka Google Drive gal marka xigta aad computer ku xidhiidhsan internetka.
• Sidoo kale meel kale oo xun waa in uusan u dhaqaaqin files galay folder Google Drive ee aan islahayn sida aad files computer aad abaabulay.
Wondershare TunesGo kaliya waa app cabsi badan jirsado wax walba wareega daqiiqad waqti. Waa hagaag, haddii aad raadinayso app ah in la wadaagi doona go ay si sahlan qaybsiga iyo files wareejinta dhexeeya qalabka, waxaa had iyo jeer waa Wondershare TunesGo. Waxa kale oo la wadaaga baxay daruur kaydinta halkaas oo waxaad ku hayn kartaa files oo iyaga ka dib isticmaali ah. Sidaas darteed, waxay isticmaalaan Wonder share ay sameyso noloshaada kala iibsiga mobile aad u fudud. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo raacaya tallaabooyinka soo socda mid aad u fudud oo sidaas aad kulmin macluumaadkaaga la isweydaarsaday.
Waxa kale oo aad de-nuqul kara xiriirada, qalabka biiro. Waxaa sidoo kale jira waa wax macquul ah si ay u maareeyaan app ururinta aad sii kordhaya, gurmad & celin iyo xitaa diro fariimo ka desktop.
> Resource > Samsung > 3 siyaabood in ay dib u soo kicin Samsung Galaxy S4 / S3